Hondo yekutanga yaive sei shure kwekuremerwa Joshua mushure meKlitschko: mafoto | TeraNews.net
Hondo yekutanga yaive sei shure kwekuremerwa Joshua mushure meKlitschko: foto
Munyori Ekaterina Yakabudiswa pa 09.11.2017
Iye anozivikanwa wemuUkraine muridzi wetsiva wetsiva weBritain, Anthony Joshua, akakunda zvekare kukunda mune imwe duel nemumwe mukwikwidzi kubva kuCameroon - Carlos Takama. Kurwira uku kwakaitika kunhandare yeMillennium muguta guru reWales, Cardiff. Yeuka kuti tiri kutaura nezvomumwechete murume wechiRungu, uyo 29 Kubvumbi 2017 gore nehunyanzvi kugogodza kuWembley Stadium muLondon, akahwina mukombe uyu neWladimir Klitschko.
Nyanzvi dzezvemitambo dzinowana dzakawanda dzisingaenzaniswi mumutambo wemitambi inorema kubva kumhepo yakazvimba Albion ine yepakati Africa. Sezvazvinoitika, varairidzi vaAnthony Joshua vaigadzira mutambi kuti arwe nenyanzvi yeBulgaria, Kurbat Pulev, uyo, nekuda kwekukuvara, akarasikirwa mujaho 12 mazuva pamberi peNdebe yeNyika. Kuti arege kumisa mukwikwidzi, varongi vacho vakatanga kutsvaga mutsigiri weChirungu. Zvakazove zvakanetsa kuwana chinorema, uye kunyange chakareba, ndosaka vakagara paCameroon.
Hondo iyi yakazove inonakidza kune vateveri, avo vatove pa4 kutenderedza vakatenda kudzidziswa uye simba remutambi weAfrican, uyo akapaza Briton. Nekudaro, yatove mumutambo wechigumi, rombo rakasimuka rakananga kune muChirungu, uyo akapedzisira akunda muhondo nekutenda kune mutambi kuenda mberi. Achitarisa nemhinduro kubva kunevateereri pamasocial network, Takam aive pamakumbo ake uye aigona kuenderera mberi nemutambo, nekudaro achibvunza mibvunzo isina kugadzikana kune ivo varongi vekumhanya.
Sekureva kwemukundi, kushaya gadziriro kwakatadzisa Cameroon kubva kunze. Vashandi vekudzidzira vakagadzirira Joshua kurwira neKurbat Pulev yemamita maviri, vachichinjanisa chimiro uye punches kuti ukure kweanopikisa. Zvichida kushanda mukuparadzana nevarume vadiki zvaizobatsira kuti mumhanyi aise muAfrica pamberi. Asi sezvavanotaura, ivo vanokunda havana kutongwa - bhandi remakwikwi uye kufara kwema 75 zviuru zvezana kunoenda kuna Briton Anthony Joshua.
Mafuta Burner Zvigadzirwa: Ngano Kubva kuInternet
Creatine: yemitambo inowedzera - mhando, zvinobatsira, kukuvadza
Ndeipi orbitrek iri nani kutenga imba
Zvigadzirwa zvekuvandudza kwehuropi basa
Imba Humidifier: CH-2940T Krete